Blog Reader: [Sing Swim Sway.....] 25 New Entries: Bangkok is Sinking Under the Sea
[Sing Swim Sway.....] 25 New Entries: Bangkok is Sinking Under the Sea
Bangkok is Sinking Under the Sea
via Thai Photo Blogs by Richard Barrow on 11/17/08
Bangkok and neighbouring provinces are at risk of being swamped as sea levels rise, according to warnings at the recent Intergovernmental Panel on Climate Change meeting. The capital rests about 3½ to5feet above the nearby gulf, although some areas already lie below sea level. The gulf's waters have been rising by aboutatenth of an inchayear. But the city, built on clay rather than bedrock, has also been sinking atafar faster pace of up to4inches annually as its population and factories pump some 2.5 million cubic tons of water out of its aquifers. This compacts the layers of clay and causes the land to sink. The capital could be under the sea as early as 15-20 years. These pictures were taken at Samut Prakan this morning as high tide flooded the city center. There has been no rain for the last several weeks. (Richard Barrow/ThaiPhotoBlogs.com)
Click to see more pictures of High Tide Flood in Samut Prakan.
via The Download Blog: Software tips, news, and opinions from Download.com editors by Seth Rosenblatt on 10/2/08
Books isafree tool that can help you organize your book collection, acting asasort of iTunes for physical books. This virtual card catalog lets you classify all the books you own using pre-defined fields like title, author, and publication date. You can also create your own.
Books also lets you track and store summaries, cover images, personal reviews and ratings, notes on multiple copies ofasingle book, and more--and it even helps you trackabooks lending history. Smart Lists, much like iTunes' Smart Playlists, let you group books by criteria--for example, by author, genre, or publication period. Books also imports another great feature from the music world: the online database. Using Web sites such as Amazon.com, Books can "quickfill" fields. Type in the ISBN for any tome and Books will auto-fill much of the books metadata and even pull inacover image.
Books also gives you export options in case you want to use your book list elsewhere, letting you export into HTML, PDF, onto your iPod, or even just as tab-delimited text, in case you want to drop it all into Excel. In addition to being free, Books is also open-source so that means if you'readeveloper, the sky is the limit for tweaking Books and creating localizations and custom plug-ins. It also meansalot of users have pitched in to help Books' conscientious and responsive developer, giving this toolalife beyond what it might have otherwise.
ปลื้มระนองส่งออกโตกว่า 30% + หอฯแนะรักษาลูกค้าหม่อง ที่เซ็งคุณภาพสินค้าจีนให้อยู่หมัด
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2360 24/09/2008
พม่าเลิกเห่อสินค้าจีน เหตุคุณภาพต่ำ หวนมาใช้สินค้าไทย ผู้ประกอบการไทย ปลื้ม ยอดส่งออกเติบโตกว่า 30% หอฯระนองระบุตลาดมืดยังคึกคักถึง 65% พร้อมให้เดินกลยุทธ์รักษาลูกค้าหม่องให้อยู่มือ
นายพงษ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรจังหวัดระนอง กล่าวว่าการค้า-ส่งออกไทย-พม่าขณะนี้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมาก ยอดการนำเข้า-ส่งออกขยับเพิ่มขึ้นกว่า 30% สวนทางกับเศรษฐกิจที่กำลังมีปัญหาในขณะนี้ ที่สำคัญยังมีหลายกลุ่มสินค้าใหม่ๆ หลายตัวที่กำลังเป็นสินค้าดาวรุ่งที่กำลังได้รับความนิยมในพม่า
"สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก เฉพาะที่ผ่านทางด่านศุลกากรระนองในช่วงเดือนสิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา มียอดการนำเข้าทั้งหมด 247,115,768 บาท ส่วนยอดการส่งออกที่พม่านำเข้าจากไทยหรือสั่งซื้อจากไทยจำนวน 830,528,356 บาท โดยในกลุ่มสินค้าส่งออกมีสินค้าหลายๆ ตัวที่มียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมากอาทิน้ำมันพืช เดือน ส.ค.ที่ผ่านมามีการส่งออก 38,937,980 บาท,เครื่องดื่มต่างๆ 30,765,978 บาท,ครีมเทียม,โอวัลติน 19,054,689 บาท ,เครื่องดื่มให้พลังงาน 15,952,847 บาท,เวชภัณฑ์ยา 11,386,737 บาท,ขนม 3,370,273 บาท,นมสด,นมข้น 1,732,240 บาท"
นายดำรง ขจรมาศบุษย์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดระนอง และผู้ส่งออกยารายใหญ่ กล่าวว่า ตลาดการค้าไทย-พม่าที่ถูกต้อง คิดเป็นสัดส่วนเพียง 35% เท่านั้น ที่เหลืออีก 65% เรียกว่าตลาดมืด คือตลาดที่มีการส่งออกโดยไม่ผ่านกระบวนการทางศุลกากร ซึ่งหากตัวเลขทางด่านศุลกากร ที่มีอัตราการขยายตัว แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้บรรยากาศการค้า ในส่วนของตลาดมืด ก็คึกคักเช่นเดียวกัน
"จากกรณีที่สินค้าจากจีนมีปัญหา ถือเป็นจังหวะที่ดีที่ สินค้าจากไทยจะกลับมาหวนคืนยึดตลาดพม่าอีกครั้ง ซึ่งอยู่ที่กลุ่มผู้ค้าคนไทย ว่าจะปฏิบัติอย่างไร หรือมีแนวทางการทำตลาดอย่างไรเพื่อที่จะยืนหยัดอยู่ในตลาดพม่า ไม่เกิดปัญหาเช่นที่ผ่านมา"
นายธีระพล ชลิศราพงษ์ นักธุรกิจค้าชายแดนไทย-พม่าด้านจังหวัดระนอง-เกาะสอง เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าสภาวะตลาดการค้าขาย ตามแนวชายแดนไทย-พม่า โดยเฉพาะด้านจังหวัดระนอง-เกาะสอง รวมถึงบรรยากาศค้าขายโดยทั่วไป ระหว่างไทยกับพม่าว่าขณะนี้บรรยากาศการค้าขายสุดคึกคัก เนื่องจากผู้ประกอบการชาวพม่าจำนวนมากเริ่มไม่พอใจสินค้าจากจีน
"วันนี้พม่ามีความต้องการสินค้าจากไทยมากด้วยเหตุผล2ปัจจัยหลักคือ หนึ่งผลจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ พม่าเริ่มฟื้นตัวได้ จึงทำให้ความต้องการบริโภคขยับพุ่งตามไปด้วย ประกอบกับ โรงงานผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ในพม่าจำนวนหลายร้อยโรง ประสบความเสียหายจากภัยพิบัติ อีกปัจจัยคือ คุณภาพของสินค้าจากประเทศจีน ยังไม่ค่อยจะได้มาตรฐานมากนัก ทำให้ชาวพม่าเริ่มเกิดความไม่มั่นใจ และลังเลที่ จะซื้อสินค้าจากจีน แม้ว่าราคาจะต่ำกว่าสินค้าไทย แต่ส่วนหนึ่งจึงหันกลับมาสั่งซื้อสินค้าจากไทย ส่งผลให้ ยอดการส่งออกสินค้า จากประเทศไทยช่วงตั้งแต่กลางเดือนส.ค.ที่ผ่านมาขยับสูงกว่าช่วงปกติ 30-40%"
นายธีระพลกล่าวต่อว่าชาวพม่าแบ่งระดับสินค้าที่จำหน่ายในพม่าเป็น5ระดับตามราคาและคุณภาพของตัวสินค้า สำหรับสินค้าจากไทย ถือเป็นสินค้าระดับคุณภาพเกรดเอ ส่วนสินค้าจากประเทศจีนเป็นสินค้าคุณภาพต่ำ แต่มีข้อได้เปรียบคือ มีราคาถูกกว่าสินค้าจากไทย ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาสินค้าจากจีนหลายๆ ตัวโดยเฉพาะ สินค้าประเภท อุปโภค-บริโภค สามารถเข้ามาเบียดแย่ง และยึดครองตลาดในพม่าได้เป็นจำนวนมาก
"แต่จากปัญหาคุณภาพของสินค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องของจีน ส่งผลให้ ชาวพม่าขาดความเชื่อมั่นลงไปเรื่อยๆ เริ่มจากสินค้า ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนหน้านี้สินค้าจากไทย ถูกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกเบียดแย่งตลาดไปกว่าครึ่ง แต่ปัจจุบัน ปรากฏว่าความนิยมในสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน ลดลงเป็นอย่างมาก เกิดจากปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่ทนทาน ดังนั้นสินค้าไทยจึงสามารถเบียดแย่งตลาดคืนกลับมาได้"
นอกจากนี้สินค้าอีกหลายๆตัว ที่โดนสินค้าจากจีนแย่งตลาดอาทิผลิตภัณฑ์ยา,เครื่องดื่ม,อาหารกระป๋อง,นม,ขนม,น้ำมันพืช,บะหมี่ แต่วันนี้ปรากฏว่า สินค้าเหล่านั้นต่างมียอดการสั่งซื้อ กลับเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นช่วงโอกาสที่ดี ที่ผู้ค้าและผู้ประกอบการจากไทย จะใช้จังหวะนี้เบียดแย่งตลาดการค้าในพม่ากลับคืนมาจากจีน
နွယ်လေး။ - NMG NEWS
စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်။
တရားမ၀င်ဆိုင်ကယ်များကို လိုင်စင် ပြုလုပ်ပေးမည့် သတ်မှတ်ရက် ကုန်ဆုံးချိန် နီးကပ်လာသဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ကော့သောင်းမြို့တွင် ဆိုင်ကယ်များ ဈေးအဆမတန် တက်သွားသည်ဟု ကော့သောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
မြိတ်၊ ထားဝယ်မြို့ဆိုင်ကယ်ပွဲစားများက ကော့သောင်းမြို့သို့လာရောက်ကာ ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းမြို့တွင် ဆိုင် ကယ် အစီးရေ သောင်းနှင့်ချီ လာရောက်ဝယ်ယူနေသဖြင့် ဆိုင်ကယ်ဈေး မြှင့်တက်လာပြီး ဈေးကွက်တွင် ပြတ်လပ်လုနီးပါး ဖြစ်နေသည်ဟု ကော့သောင်းဒေသခံတဦးက ယခုလိုသည်။
"ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ဟိုဘက်ကမ်းမှာ ဘတ်ငွေနဲ့ လေးသောင်းခွဲ၊ လေးသောင်း ခြောက်ထောင် လောက်ရှိတယ်။ ဒီဘက်ကမ်းမှာ ငါးသောင်းခုနှစ်ထောင်လောက် ပေါက်တယ်။ ခုဈေး။ အရင်က ငါး သောင်းတစ်ထောင် ငါးသောင်း နှစ်ထောင်။ ငါးသောင်း ကျော်ကျော်ပဲရှိတာ။ ခုက ခုနှစ်ထောင် လောက်တက်သွားတာပေါ့။ လိုင်စင်လုပ်ပေးမှ တဖြည်းဖြည်း တက်လာတာပေါ့နော်။ လိုင်စင်လုပ်ပေး တော့ ၀ယ်သမားများလာတော့ ဈေးက တက်လာတာပေါ့။ သယ်ရတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကလဲ မတရား လမ်းကြောင်းက သယ်ကြတာဆိုတော့ ဈေးကမတရား တက်တာပေါ့"
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င်တင်သွင်းထားသော ဆိုင်ကယ်များကို ဇူလိုင်လ(၁)နေ့မှ စတင်ကာ အောက်တို ဘာလ(၃၁) နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး ညွန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ လိုင်စင်ပြုလုပ် ပေးနေသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာ အများဆုံး တင်သွင်းနေသည့် ဆိုင်ကယ်အမျိုးစားမှာ Dream နှင့် Wave ဟွန်ဒါအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ယာမဟာနှင့် အခြားဆိုင်ကယ် အမျိုးအစားများလည်း တင်သွင်းနေသည်။
ကော့သောင်းမြို့၌ ဆိုင်ကယ် လိုင်စင် ပြုလုပ်ပေးရာတွင် ဆိုင်ကယ်အမျိုး အစားအပေါ် မူတည်၍ ရေဘေးရံပုံငွေ အတွက် ကောက်ခံနေကြောင်း ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် အသစ် ပြုလုပ်သူ တဦး က ပြောသည်။
"ရံပုံငွေက ရေဘေးဒုက္ခသည်တွက်တဲ့။ ရေဘေးဒုက္ခသည်ဆီ ရောက်မရောက်မသိဘူး။ အကောက်ခွန် ဦးဌာနက ကောက်တယ်။ အဖွဲ့စုံပါပဲ ကောက်တာ။ ကညနရုံးမှာ အခွန်သွားဆောင်ရတယ်။ အဲမှာ တစ်ခါတည်းဖြတ်တာ။ အခွန်ဦးစီးက ဘယ်လောက် ဟိုဟာက ဘယ်လောက် ဒီဟာက ဘယ်လောက် ပေါ့ဗျာ။ ပြီး ရေဘေးဒုက္ခသည်တွက်က သီးသန့်ငါးသောင်း အဲဒါက အလှူငွေ။ အဓိကဆောင်ခိုင်းတာ က ရေဘေးဒုက္ခသည်တွက် ရံပုံငွေပေါ့ဗျာ။ အဲဒါ ကျနော်တို့ ဟွန်ဒါအမျိုးစား ဒရင်းမ်၊ ၀မ်းတူးဖိုက် တွေ အားလုံးက နှစ်သိန်းရှစ်သောင်း။ ကျန်တဲ့ ဝေ့ဗ် တစ်ရာကျတော့ နည်းနည်း ဈေးလျော့တယ် နှစ် သိန်း ငါးသောင်း နှစ်သိန်းခြောက်သောင်း လောက်ပေါ့။"
အဆိုပါ နံပါတ်ကို နှိပ်စဉ်"သာယာနာ ပျော်ဖွယ်သီချင်း အစီအစဉ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် "ဟု ဝန်ဆောင်မှု ပေး၍ လမ်းညွန်ထားသည်။
"အခုလို ကိုယ့် မြန်မာသီချင်းကို ဖုန်းမှာ နားထောင်ရတော့ ပျော်ပါတယ်၊ ဒါကို ကျနော်တို့တွေ ဘန်ကောက် ၊ မဲဆောက်နဲ့ ချင်းမိုင်းမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီက အချင်းချင်းရကြတယ်" ဟု ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားအများစု ဈေးရောင်းသည့် ညဈေး (Night Bazaar) တွင် အလုပ်လုပ်နေသော ကိုအောင်ထွန်းက ပြောသည်။
อันดับ 10 เทคนิคการเขียนกลับทาง (Mirror Writing)
เทคนิคการเขียนตัวอักษรย้อนกลับทิศทางจากตัวหลังไปตัวหน้าของดาวินชี สร้างข้อถกเถียงให้กับนักวิชาการจนถึงวันนี้ว่า เป็นวิธีการเข้ารหัสแบบโบราณที่เขาสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นๆ ลอบอ่านและขโมยข้อมูลในบันทึกส่วนตัว หรือจริงๆ แล้วเป็นเพียงเพราะดาวินชี "ถนัดซ้าย" จึงคิดวิธีเขียนกลับหลังแบบนี้เพื่อไม่ให้น้ำหมึกเปื้อนมือกันแน่
อันดับ9ชุดดำน้ำ (Scuba Gear)
ผลพวงจากการที่ดาวินชีหลงใหลในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล เป็นที่มาของการออกแบบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการดำน้ำขึ้นมา หลายชนิดในจำนวนนี้ รวมถึงเรือดำน้ำ และชุดประดาน้ำที่ตัวชุดทำจากหนังและเชื่อมต่อกับท่อและโลหะทรงกลมซึ่งทำ หน้าที่เป็นเหมือนสนอร์เกิ้ล หรือหน้ากากดำน้ำยุคปัจจุบัน นอกจากนั้น ชุดดำน้ำชุดนี้ยังมีถุงเก็บปัสสาวะด้วย แสดงให้เห็นถึงความรอบคอบในการออกแบบ
อันดับ 8 สะพานชักรอก (The Revolving Bridge)
ดาวินชีออกแบบสะพานสำหรับใช้ในการเคลื่อนพลผ่านพื้นที่ในสมรภูมิทุรกันดารต่างๆ เช่น การยกพลข้ามแม่น้ำ ตัวสะพานดังกล่าวมีระบบชักรอกและสายพาน ทำให้ทหารกางออกมาใช้งานและชักรอกเก็บได้อย่างรวดเร็ว เป็นหนึ่งในเครื่องจักรทุ่นแรงอีกหลายชนิดจากการคิดค้นของดาวินชี
อันดับ7เครื่องร่อน (The Winged Gilder)
ภายในคลังจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดของดาวินชีนั้น มี "เครื่องกลบินได้" รวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก รวมถึง "เครื่องร่อน" ซึ่งตรงบริเวณปีกมีแผ่นบังคับเปิด - ปิดควบคุมทิศทางได้หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า "แฟลบ" และในตัวเครื่องร่อนยังมีเกียร์ควบคุมความเร็วที่นั่งติดอยู่ด้วย
อันดับ6ปืนใหญ่3ลำกล้อง (The Triple-Barreled Cannon)
แม้ประวัติของดาวินชีจะเกลียดสงคราม มีลักษณะเป็น "นักคิด" มากกว่า "นักรบ" แต่ในใจของเขาก็ยังฝันถึงการคิดค้นงานด้านวิศวกรรม หนทางเดียวที่จะทำเช่นนั้นได้ คือ การออกแบบอาวุธสงครามเพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจมากที่สุด หนึ่งในผลงานการออกแบบอาวุธ ได้แก่ ปืนใหญ่ที่มีอานุภาพที่มีลำกล้องติดกันถึง3กระบอก เหมือนกับที่เห็นในภาพ
อันดับ5สกรูบิน (The Aerial Screw)
ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะลงความเห็นตรงกันว่ามันไม่มีทางที่เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะบินขึ้นจากพื้นได้ แต่ "เฮลิคอปเตอร์" ในแบบของดาวินชีก็ยังคงถูกจัดให้เป็นหนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขา เครื่องกลที่ชวนให้สงสัยนี้ดูเหมือนว่าจะถูกออกแบบให้ทำงานโดยใช้คนสี่คนมาหมุนมันพร้อมกัน รวมทั้งน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากกังหันลมซึ่งเป็นของเล่นที่นิยมกันในสมัยนั้นด้วย
อันดับ4เมืองในอุดมคติ (The Ideal City)
ยุคสมัยหนึ่ง ดาวินชีอาศัยอยู่ในนครมิลานท่ามกลางสภาพการแพร่ระบาดของโรคร้าย เขาจึงคิดออกแบบผังเมืองใหม่ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขอนามัย อาทิ เขียนแบบให้เมืองในอุดมคติเมื่อหลายร้อยปีก่อนแห่งนี้มี "ระบบระบายอากาศ" เพื่อดึงอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ตัวเมือง และมีระบบระบายน้ำเสีย
อันดับ3รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (The Self-Propelled Car)
แน่นอนว่ารถที่ดาวินชีพยายามสร้างไม่สามารถวิ่งเร็วหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนรถเฟอร์รารี่ แต่ถ้าคิดว่าเป็นรถที่อยู่ในสมัยนั้นก็ต้องจัดว่าไฮเทคล้ำยุคสุดๆ เพราะรถที่มีตัวถึงทำจากไม้คันนี้ สามารถแล่นขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองด้วยแรงส่งและการทำงานอย่างสัมพันธ์กัน ระหว่างสปริงและเกียร์ที่ล้อ เมื่อปี 2547 นักวิทยาศาสตร์ประจำพิพิธภัณฑ์ในเมืองฟลอเรนซ์ทดลองสร้างแบบจำลองรถรุ่นนี้ตามแบบที่ดาวินชีร่างเอาไว้และพบว่าวิ่งได้จริง
อันดับ2แนวคิดเกี่ยวกับธรณีวิทยา (Geologic Time)
นักคิดส่วนมากในสมัยของดาวินชีนั้นมีความเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ว่าซาก ฟอสซิลของพวกหอย ปู ปลาหมึกต่างๆ ที่พบบนยอดเขานั้นเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ แต่ดาวินชีกลับไม่คิดเช่นนั้น เขาตั้งข้อสงสัยไว้ (ซึ่งก็ถูกเสียด้วย) ว่าภูเขาเหล่านั้นจะต้องเคยเป็นชายฝั่งมาก่อน ก่อนที่จะค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้นๆ ในเวลาต่อมา
อันดับ 1 วิทรูเวียนแมน (The Vitruvian Man)
เชื่อว่าชาวโลกน้อยคนนักที่จะไม่เคยผ่านตากับภาพวาดของบุรุษผู้นี้ นั่นก็คือภาพ "วิทรูเวียน แมน" ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ดาวินชีศึกษาสัดส่วนกายวิภาคมนุษย์อย่างละเอียด จนพิสูจน์ทฤษฎีบทของ "วิทรูเวียน" ผู้เป็นสถาปนิกยุคจักรวรรดิโรมันได้สำเร็จว่า "ร่างคนยืนกางแขนขาจะตกเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์เสมอ" และนับเป็นการเปิดประตูสู่ศาสตร์กายวิภาคครั้งสำคัญ
journal by Mee, your online buddy
มาแล้วๆ หมู่เลือดบอกนิสัย ฉบับการ์ตูนฮาๆ กลับมาสร้างเสียงหัวเราะอีกครั้ง พร้อมกับสาระดีๆ ที่แฝงเอาไว้ โดยมาคราวนี้ใช้ชื่อตอนว่า "การผูกมิตร" ... นั่นแน่! อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าแต่จะหมู่เลือดจะผูกมิตรอย่างไร และหมู่เลือดไหนต้องใช้วิธีอะไรบ้าง ถ้างั้นอย่ารอช้าตามเข้ามาอ่าน หมู่เลือดบอกนิสัย ฉบับการ์ตูนฮาๆ ตอน การผูกมิตร ได้เลย...
via Welcome to the Mizzima News - Burmese Version on 9/18/08
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်းမြို့နယ် ဆိပ်ကမ်းတခုတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ထားသည့် စက်လှေတစင်း ဝါယာရှော့ဖြစ်ရာမှ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားရာ ကာလပေါက်ဈေး မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဘိုး သိန်းထောင်ချီခန့် ဆုံးရှုံး ...
ချင်းမိုင်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်းမြို့နယ် ဆိပ်ကမ်းတခုတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ထားသည့် စက်လှေတစင်း ဝါယာရှော့ဖြစ်ရာမှ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားရာ ကာလပေါက်ဈေး မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဘိုး သိန်းထောင်ချီခန့် ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
ကော့သောင်းမြို့ နှင့် ထားဝယ်မြို့တို့ အကြား ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ပေးနေသည့် "အောင်ကောင်းမြတ်" အမည်ရှိ စက်လှေတစီး ကော့သောင်းမြို့နယ် ရွှေစင်ယော် ရပ်ကွက်ရှိ ဆိပ်ကမ်းတွင် ယမန်နေ့ ည ၇း၃ဝ နာရီခန့်တွင် စက်လှေမှ ရေစုပ်ထုတ်ရန် စက်နိုးရာမှ ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဘိုး ခန့်မှန်းချေ သိန်း ၆ ထောင်ကျော် ဆုံးရှုံးသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
"ကျနော်တို့ဆီမှာ ဒီမနက် သတင်းထွက်နေတာကတော့ ရေစုပ်ဖို့ စက်နိုးရာကနေပြီးတော့ ဝိုင်ယာ ရှော့ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။ အဲဒီကနေဖြစ်ပြီးတော့ မီးလောင်တယ်" ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ကော့သောင်းမြို့ ဒေသခံတဦးက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
စက်လှေ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားပြီး နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင် ဒေသခံများက အနီးအနားရှိ ကျန်ရှိသည့် စက်လှေများ မီးလောင်မည်စိုးရိမ်သဖြင့် စက်လှေအား တဖက်ကမ်းရှိ ဘဝကျွန်းတွင် သီးခြားဆွဲထုတ်ကာ မီးလောင်စေခဲ့ပြီး ယနေ့နံနက် ၁ဝးဝဝ နာရီခန့်တွင် မီးလောင်ရာမှ ကွဲသွားသည့် စက်လှေဝမ်းထဲ မြစ်ရေများ ဝင်ရောက်ခဲ့သည့်အတွက် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့သည့် မျက်မြင်သက်သေ တဦးက "ပြည်သူတွေ ဝိုင်းပြီးတော့ မီးငြိမ်းလုပ်ဖို့ နေနေသာသာ၊ အဲဒီနာမှာ ရှိတဲ့ လှေတွေတောင် ပြန်မလောင်တာ ကံကောင်း။ စက်လှေမှာက ဆီပေပါ ပါတော့ ဝုန်းဝုန်းနဲ့ ပေါက်တာကိုး။ ပေါက်တော့ ချက်ချင်းပဲ ဆွဲထုတ်သွားလိုက်တယ်" ဟု သူကပြောသည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် စက်လှေမောင်း သူမှာ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိပြီးနောက် သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများအကြား သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း မဇ္ဈိမ အနေဖြင့် သီးခြား အတည်ပြု မပြောဆိုနိုင်သေးပါ။
မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စက်လှေတွင် ဆီ (ဓါတ်ဆီ ပေပါ ) ၊ ဘိလပ်မြေ၊ ဆားအိတ်များ အပြင် အခြားကုန်ပစ္စည်းများလည်း မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည့်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုပမာဏ များကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
အလားတူ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းမြို့သို့ ပင်လယ်ထွက် ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ငါး၊ ပုဇွန်များကို ရောင်းချပြီးအပြန် ကော့သောင်း ဆိပ်ကမ်း အနီးတွင် ကုန်တင်ကုန်ချ ပြုလုပ်နေစဉ် ဆေးလိပ်မီးမှ တဆင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကာလပေါက်ဈေး မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဘိုး သိန်းတထောင်ကျော် မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
via Thailand Travel Guide by thailand travel guide on 9/14/08
source: Thai Heart Web ความรู้โรคหัวใจครบวงจร www.thaiheartweb.com
โรคความดันโลหิตสูง หรือ โรคแรงดันเลือดสูง ภาษาอังกฤษเรียก Hypertension ภาษาชาวบ้านเรียกง่ายๆว่า "โรคความดัน" ซึ่งเป็นโรคที่รู้จักกันมาก โรคหนึ่ง แต่เชื่อไหมครับ จากการศึกษาพบว่าชาวอเมริกันร้อยละ 68.4 เท่านั้นที่ทราบว่าตัวเองมี ความดันโลหิตสูง และมีเพียงร้อยละ 53.6 ที่รับการรักษา และในกลุ่มนี้มีเพียงร้อยละ 27.4 ที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี นั่นเป็นสถิติต่างประเทศ สำหรับบ้านเรายังล้าหลังเรื่องข้อมูลพวกนี้อยู่มาก ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้คงช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ และ เห็นความสำคัญของการรักษาความดันโลหิตสูงมากขึ้น
ลองนึกภาพสายยางรดน้ำต้นไม้ มีน้ำไหลเป็นจังหวะการปิดเปิดของก๊อก เมื่อเปิดน้ำเต็มที่ น้ำไหลผ่านสายยาง ย่อมทำให้เกิดแรง ดันน้ำขึ้นในสายยางนั้น และเมื่อปิดหรือหรี่ก๊อก น้ำไหลน้อยลง แรงดันในสายยางก็ลดลงด้วย ระบบหัวใจและหลอดเลือด ก็เป็น ระบบไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกาย โดยมีหัวใจ ทำหน้าที่คล้ายก๊อก หรือ ปั๊มน้ำ คอยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย เลือดไหลแรงดี ความดันก็ดี หากหัวใจบีบตัวไม่ดี เลือดไหลอ่อน ความดันก็ลดลง นอกจาก นั้นแล้วความดันในหลอดเลือดยังขึ้นกับสภาพของ หลอดเลือดด้วย หากหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดี จะปรับความดันได้ดี ไม่ให้สูงเกินไป แต่หาก หลอดเลือดเสียความยืดหยุ่น หรือ แข็งตัว ก็จะทำให้ความดันเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ค่าความดันโลหิตจะมีสองค่าเสมอ เรียกว่า ตัวบน และ ตัวล่าง ค่าแรกเป็นความดันโลหิตในหลอดเลือดที่เกิดขึ้นขณะที่หัวใจ บีบตัว ไล่เลือดออก จากหัวใจ ส่วนตัวล่างคือความดันของเลือดที่ยังค้างอยู่ในหลอดเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว ผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงควรจำค่าทั้งสองไว้ เพราะมีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
ปัจจุบันความดันโลหิตที่เรียกว่า เหมาะสม ในผู้ที่อายุมากกว่า 18 ปี คือ ตัวบนไม่เกิน 120 มม.ปรอท และตัวล่างไม่เกิน 80 มม.ปรอท เรียกสั้นๆว่า 120/80 ความดันโลหิตที่ "อยู่ในเกณฑ์ปกติ" คือ ต่ำกว่า 130/85 มม.ปรอท ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ 130-139/85-89 มม.ปรอท จะเรียกได้ว่ามีความดันโลหิตสูงเมื่อ ความดันโลหิตตัวบนมากกว่า (หรือเท่ากับ) 140 และตัวล่างมากกว่า (หรือเท่ากับ) 90 มม.ปรอท อย่างไรก็ตามก่อน ที่จะเรียกว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงได้นั้น แพทย์จะต้องวัดซ้ำหลายๆครั้ง หลังจากให้ผู้ป่วยพักแล้ว วัดซ้ำจนกว่าจะแน่ใจว่าสูงจริง และที่สำคัญเทคนิค การวัดต้องถูกต้องด้วย
ความดันโลหิต "ตัวบน" (มม.ปรอท)
ความดันโลหิต "ตัวล่าง" (มม.ปรอท)
ความดันโลหิตที่เหมาะสม < 120 และ < 80
ความดันโลหิตปกติ <130 และ <85
ความดันโลหิตสูงเล็กน้อยแต่ยังปกติ 130-139 หรือ 85-89
ระยะที่ 1 (อ่อน) 140-159 หรือ 90-99
ระยะที่2(ปานกลาง) 160-179 หรือ 100-109
ระยะที่3(รุนแรง) > 180 หรือ > 110
เครื่องมือที่ใช้วัดความดันโลหิตที่เป็นมาตราฐานคือผ้าที่มีถุงลมพันที่แขน และ ใช้ปรอท ในขณะวัดความดันโลหิตผู้ถูกวัดความดัน โลหิตควรจะอยู่ ในท่านั่งสบายๆ วัดหลังจากนั่งพักแล้ว5นาที ไม่วัดหลังจากดื่มกาแฟ หรือ สูบบุหรี่ ขนาดของผ้าพันแขนก็ต้อง เหมาะสมกับแขนผู้ถูกวัดด้วย หากอ้วนมากแล้วใช้ผ้าพันแขนขนาดปกติ ค่าที่ได้จะสูงกว่าความเป็นจริง การปล่อยลมออกจาก ที่พันแขนก็มีความสำคัญอย่างมาก และ เป็นที่ละเลย กันมากที่สุด คือจะต้องปล่อยลมออกช้าๆ ไม่ใช่ปล่อยพรวดพราดดังที่เห็น หลายๆแห่งทำอยู่ การทำเช่นนั้นทำให้ได้ค่าที่ผิดไปจากความเป็นจริงมาก เครื่องวัดความดันก็ต้องได้มาตราฐาน ไม่ใช่เครื่องเก่า มากหรือมีลมรั่ว เป็นต้น ตำแหน่งของเครื่องวัดก็ควรอยู่ระดับเดียวกับหัวใจ และต้องวัดซ้ำๆ เพื่อหาค่าเฉลี่ย
ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ออกแบบมาให้วัดความดันโลหิตได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยผู้วัดไม่จำเป็นต้องมีความรู้เลย เพียงแค่ใส่ถ่าน พันแขนและกดปุ่ม เครื่องจะวัดให้เสร็จ อ่านค่าเป็นตัวเลข เครื่องแบบนี้มีขายตามศูนย์การค้าทั่วไป โดยทั่วไปแล้วใช้งานได้ดี (แบบพันแขน) แต่ก็ต้องนำเครื่องมา ตรวจสอบความถูกต้องเป็นครั้งคราว ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรมีเครื่องชนิดนี้ไว้วัดที่บ้านด้วย ในอนาคตเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทอาจจะเลิกใช้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากผลทางสิ่งแวดล้อม(ปรอทเป็นสารอันตราย) และ อีกเหตุผลหนึ่งคือใช้เทคนิคมากในการวัดให้ถูกต้อง
ความรู้ปัจจุบันพบว่าการวัดความดันโลหิตที่ดีที่สุดคือการวัดความดันโลหิตตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหลับและตื่น เพื่อดูแบบแผน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และหาค่าเฉลี่ยความดันโลหิตของช่วงกลางวันและกลางคืน ค่าที่ถือว่าปกติโดยการวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมงนี้ คือ ขณะตื่นความดันโลหิตเฉลี่ยควร น้อยกว่า 135/85 มม.ปรอท และเมื่อหลับความดันโลหิตเฉลี่ยควรน้อยกว่า 120/75 มม.ปรอท
ประการแรกคือความดันโลหิตเป็นค่าไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกวินาที จึงไม่แปลกที่วัดซ้ำในเวลาที่ใกล้เคียงกัน แล้วได้คนละค่า แต่ก็ไม่ควรจะแตกต่างกันนัก ความดันโลหิตยังขึ้นกับท่าของผู้ถูกวัดด้วย ท่านอนความดันโลหิตมักจะสูงกว่าท่ายืน นอกจากนั้นแล้ว ยังขึ้นกับ สิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น อาหาร บุหรี่ อากาศ กิจกรรมที่ทำอยู่ รวมทั้งจิตใจด้วย
ประการต่อมาคือภาวะความดันโลหิตสูงปลอม หมายความว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยไม่ได้มีความดันโลหิตสูง แต่ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบ เมื่อมาวัดความดันโลหิต ที่คลินิกแพทย์หรือโรงพยาบาล จะวัดได้สูงกว่าปกติทุกครั้ง แต่เมื่อวัดโดยเครื่องวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมงหรือวัดด้วยเครื่องอิเลคโทรนิคเองที่บ้าน กลับพบว่าความดันปกติ เรียกภาวะเช่นนี้ว่า White coat hypertension หรือ Isolated clinic hypertension กลุ่มนี้มีอันตรายน้อยกว่าความดันโลหิตสูงจริงๆ
ความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไร และ มีอาการอย่างไร
จนถึงปัจจุบันนี้ความดันโลหิตสูงก็ยังเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นส่วนใหญ่ มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารรสเค็ม เชื้อชาติ ส่วนน้อยเกิด (น้อยกว่าร้อยละ 5) จากความผิดปกติของหลอดเลือด ไตวาย หรือ เนื้องอกบางชนิด ความดันโลหิตสูงได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรเงียบ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ ไม่ทราบว่าตัวเองมีความดันโลหิตสูง หรือ แม้จะทราบแต่ละเลยไม่สนใจรักษาเพราะรู้สึกปกติ สบายดี ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่างๆตามมาภายหลัง ผู้ป่วยส่วนน้อยที่มี อาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ
การที่ปล่อยให้ความดันโลหิตสูงอยู่เป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง โดยเฉพาะหลอดเลือด เลี้ยงสมอง ตา หัวใจ และไต จึงทำให้หลอดเลือดสมองแตก หรือ ตีบตัน เป็นอัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคหัวใจขาดเลือด ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วความดันโลหิตสูง ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น จนเกิดหัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจหนา ซึ่งไม่เป็นผลดีเลย อาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายตามมา เห็นได้ว่า การละเลย ไม่สนใจรักษาก็จะมีโทษต่อตนเอง ในอนาคต เป็นที่น่าเสียดายที่ผลแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมความดันโลหิต แม้จะไม่สามารถป้องกัน ได้ทั้งหมดก็ตาม ดังนั้นการรักษาความดันโลหิตสูงในวันนี้ ก็เพื่อที่จะลดโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนร้ายแรงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตลงให้มากที่สุดนั่นเอง
- ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ การรับประทานยาเป็นเพียงการรักษาที่ปลายเหตุ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาตลอดไป หากหยุดยา ความดันโลหิตอาจกลับมาสูงอีกได้
- เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ แม้ความดันโลหิตจะสูงมากๆก็ตาม ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้อาการมาพิจารณาว่า วันนี้จะรับประทานยา หรือไม่ เช่น วันนี้สบายดีจะไม่รับประทานยาเช่นนั้นไม่ได้
- การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลาเป็นระยะเวลานาน จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคแทรกทางสมอง หัวใจ ไต และหลอดเลือดได้
- การรักษาแบ่งเป็น2ส่วน คือ การไม่ใช้ยา กับการใช้ยา การไม่ใช้ยาหมายถึงการลดน้ำหนัก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดบุหรี่ และหลีกเลี่ยงอาหารเค็ม ในผู้ป่วยที่ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย อาจเริ่มการรักษาโดยไม่ใช้ยา แต่หากมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิด โรคหัวใจอยู่ด้วยก็อาจจำเป็นต้องใช้ยาร่วมด้วย
- ปัจจุบันมียาลดความดันโลหิตอยู่หลายกลุ่ม กลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันไป ราคาก็ต่างกันมาก ตั้งเม็ดละ 50 สตางค์ ถึง 50 บาท ยาลดความดัน โลหิตที่ดี ควรจะออกฤทธิ์ช้าๆ ไม่ทำให้ความดันโลหิตแกว่งขึ้นลงมากจนเกินไป สามารถควบคุมความดัน โลหิตได้ดีตลอด 24 ชั่วโมง โดยการรับประทาน เพียงวันละ 1 ครั้ง มีผลแทรกซ้อนน้อย แต่น่าเสียดายว่ายังไม่มียาใดที่วิเศษ ขนาดนั้น ยาทุกตัวล้วนก็มีข้อดี ข้อด้อย และ ผลแทรกซ้อนทั้งสิ้น อย่าลืมว่า การปล่อยให้ ความดันโลหิตสูงอยู่นานๆ ก็เป็นผลเสีย ร้ายแรงเช่นกัน จึงควรติดตามการรักษาโดยการวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง หากมี ผลแทรกซ้อน ควรปรึกษาแพทย์ท่านเดิมเพื่อปรับเปลี่ยนยา ไม่ควรเปลี่ยนแพทย์ไปเรื่อยๆ เพราะทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง
- การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยสูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นต้องรักษา แต่ต้องรักษาด้วยความระมัด ระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากหากลด ความดันโลหิตมากเกินไป ก็อาจเกิดผลเสียขึ้นได้
- นอกจากการรับประทานยาแล้ว การควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้ผ่องใส งดอาหารเค็ม ก็จะช่วยให้ ควบคุมความดันโลหิต ได้ดียิ่งขึ้น
ความจริงแล้วไม่มี โรคความดันต่ำ มีแต่ภาวะความดันโลหิตต่ำที่เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายขาดสารน้ำ เช่น ท้องเสีย อาเจียน เสียเลือด อากาศร้อนจัด หรือจากยาบางชนิด ความดันโลหิตที่วัดได้ 90/60 มม.ปรอท ไม่ได้หมายความว่าเป็นความดันโลหิต ที่ต่ำกว่าปกติ คนจำนวนมากมีความดันโลหิตขนาดนี้ โดยไม่มีอาการผิดปกติ อาการหน้ามืด เวียนศีรษะบ่อยๆ ที่คนส่วนใหญ่ คิดว่าเป็นจาก "ความดันต่ำ" นั้น อาจเกิดจากหลายสาเหตุ มักจะเกิดจากการ ขาดการออกกำลังกาย มากกว่าที่จะเกิดจากภาวะ ความดันโลหิตต่ำ การรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ ต้องรักษาที่สาเหตุ ไม่ใช่การดื่มเบียร์อย่างที่เข้าใจกัน
เราได้ทราบประโยชน์ของผลไม้ธรรมดาๆ อย่าง "กล้วย (banana)" มาแล้ว ซึ่งการรับประทานกล้วยเป็นประจำ
นอกจากจะได้ประโยชน์ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้อีกด้วย
กล้วยมีธาตุเหล็กสูง จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการผลิตฮีโมโกลบินในเลือด ช่วยได้ในกรณีที่มีภาวะโลหิตจาง
กล้วยมีธาตุโปแตสเซียมสูง แต่มีปริมาณเกลือต่ำ จึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิต เอฟดีเอหรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกายินยอมให้โฆษณาได้ว่ากล้วยเป็นผลไม้พิเศษ ช่วยลดอันตรายที่เกิดจากความดันโลหิตหรือโรคเส้นเลือดฝอยแตก
จากการวิจัยที่ลงในวารสาร The New England Journal of Medicine ระบุว่าการรับประทานกล้วยเป็นประจำสามารถลดอันตรายที่เกิดกับเส้นโลหิตแตกได้ถึง 40%
จากการสำรวจผู้ที่มีความทุกข์ซึ่งเกิดจากความซึมเศร้า หลายคนจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมากหลังจากได้รับประทานกล้วย เพราะในกล้วยมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ทริปโตฟาน เมื่อสารนี้เข้าไปในร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นเซโรโทนิน ซึ่งเป็นตัวผ่อนคลายและปรับปรุงอารมณ์ให้ดีขึ้น คือทำให้เรารู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้นนั่นเอง
กล้วยเป็นอาหารที่ใช้ควบคุมการเกิดโรคลำไส้เป็นแผล เพราะเนื้อกล้วยมีความอ่อนนิ่มพอดี เป็นผลไม้ชนิดเดียวที่ทานได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคลำไส้เรื้อรัง และกล้วยยังมีสภาพเป็นกลางไม่เป็นกรด ทำให้ลดการระคายเคืองและยังไปเคลือบผนังลำไส้และกระเพาะอาหารด้วย
กล้วยมีสารลดกรดตามธรรมชาติที่มีผลต่อร่างกายของเรา ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับอาการเสียดท้อง ลองรับประทานกล้วยสักผล จะรู้สึกผ่อนคลายจากอาการเสียดท้องได้
วิธีหนึ่งที่จะแก้อาการเมาค้าง ก็คือการดื่มกล้วยปั่นกับนมและน้ำผึ้ง กล้วยจะทำให้กระเพาะอาหารสงบลง ส่วนน้ำผึ้งจะเป็นตัวช่วยเสริมปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดที่หมดไป ในขณะที่นมก็ช่วยปรับระดับของเหลวในร่างกายของเรา
ในกล้วยมีวิตามินบีสูงมาก ช่วยทำให้ระบบประสาทสงบลงได้ จากการศึกษาของสถาบันจิตวิทยาในออสเตรียพบว่า ความกดดันในที่ทำงานเป็นสาเหตุหนึ่งของการกินจุบกินจิบ เช่น ของหวานประเภทช็อคโกแล็ตและอาหารประเภททอดกรอบต่างๆ คนไข้ 5,000 คนในโรงพยาบาลต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นโรคอ้วน และส่วนใหญ่ทำงานภายใต้ความกดดันสูงมาก
เพื่อหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแบบไม่บันยะบันยังจนเป็นเหตุให้น้ำหนักเกิน เราจึงต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือด ด้วยการรับประทานอาหารว่างที่มีปริมาณคาร์โบโฮเดรตสูง เช่น รับประทานกล้วยทุก2ชั่วโมงเพื่อรักษาปริมาณน้ำตาลให้คงที่ตลอดเวลา กล้วยมีวิตามินบี6ซึ่งประกอบด้วยสารควบคุมระดับกลูโคสที่สามารถมีผลต่ออารมณ์ได้
ความเครียด โปแตสเซียมที่มี อยู่สูงมากในกล้วยจะช่วยให้เกิดความสมดุล เวลาที่เกิดอารมณ์เครียด อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราจะขึ้นสูง และทำให้ระดับโปแตสเซียมในร่างกายของเราลดลง
ความสับสนของอารมณ์เป็นครั้งคราว กล้วยสามารถช่วยในเรื่องของอารมณ์และความสับสนได้ เพราะ
ในกล้วยมีสารตามธรรมชาติ ที่ชื่อว่า ทริปโตฟาน ซึ่งทำให้อารมณ์ดี
การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย กล้วยเป็นผลไม้ที่สามารถทำให้อุณหภูมิเย็นลงได้ ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ โดยเฉพาะอุณหภูมิของอารมณ์ของคนที่เป็นแม่ คนโบราณจึงมักจะให้ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์รับประทานกล้วยทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าทารกที่จะเกิดมามีอุณหภูมิเย็น
โรคหูด การรักษาหูดด้วยวิธีทางเลือกแบบธรรมชาติโดยการใช้เปลือกกล้วยวางปิดลงไปบนหูด แล้วใช้แผ่นปิดแผลหรือเทปติดไว้ ใครจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ไม่น่าจะมีอันตราย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า "กล้วย" จะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการผิดปกติบางอย่างของร่างกายได้ แต่ต้องไม่ลืมรักษาหรือแก้ไขที่ต้นเหตุของอาการป่วยก่อน แล้วจึงใช้กล้วยเป็นตัวช่วยค่ะ
September 3rd, 2008 ref from http://komyo.burmachannel.com
NEJ/ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရထုတ်ဝေထားသည့် ငွေအကြွေစက္ကူ ရှားပါးမှုကြောင့် တနင်္သာရီတိုင်းရှိ မြိတ်၊ ပုလောနှင့် မြို့အချို့တွင် မြိတ်ဒေါ်လာဟုခေါ်ဆိုသော ပြုပြင်ထားသည့် ငွေစက္ကူများကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
မြို့ခံတဦးက "မြိတ်ဒေါ်လာဆိုပေမယ့် အထွေအထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စုတ်ပြဲ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ (၁ဝ) ကျပ်၊ (၂ဝ) ကျပ်၊ (၅ဝ) ကျပ်၊ (၁ဝဝ) ကျပ်နဲ့ (၂ဝဝ) ကျပ်တန် ငွေစက္ကူတွေကို ပလတ်စတစ်အိတ် အကြည်လေးထဲမှာထည့်၊ မီးနဲ့ ပိတ်ထားတဲ့ ငွေတွေကို သုံးစွဲနေကြတာပါ။ ဘယ်သူက စလိုက်တာ မသိပေမယ့် ခုတော့ မြိတ်နဲ့ အခြားမြို့ အတော် များများမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြပြီ။ ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ ငွေစက္ကူ ဘယ်လောက်စုတ်စုတ် လူတွေက နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ ယူကြတယ်" ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပလတ်စတစ်အိတ်သွတ် ငွေစက္ကူများ မသုံးစွဲခင်က မြိတ်မြို့တွင် ဈေးဝယ်ပြီး အကြွေပြန်အမ်းရန်မရှိပါက သကြားလုံး၊ ဆေးလိပ်၊ တစ်သျှူးစက္ကူ စသည်တို့ဖြင့် ပေးချေကြောင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သည်က ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ကုန်ခြောက်ဆိုင်က မဆလာ၊ ငရုပ်သီး စသည်တို့ဖြင့် ပေးချေသည့်အတွက် မလိုချင်သော်လည်း ယူနေရသဖြင့် ငွေကုန်ကြေးကျများကြောင်း၊ ငွေစက္ကူအစုတ်များကို ဘဏ်များက လဲမပေးဘဲ အသစ်လည်း မထုတ်သောကြောင့် စုတ်ပြတ်ဟောင်းနွမ်းနေသည့် ငွေစက္ကူများကို ကိုင်မသုံးလိုကြသဖြင့် ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲ ထည့်သုံးရာတွင် အဆင်ပြေကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
ငွေစက္ကူအကြွေ ရှားပါးသည့် ပြဿနာ ကြုံနေရသည်မှာ မြိတ်မြို့တခုတည်းမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရက (၅၊ ၁ဝ၊ ၂ဝ၊ ၅ဝ၊ ၁ဝဝ၊ ၂ဝဝ) ကျပ်တန်ငွေစက္ကူအသစ်များ ထပ်မံရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း မရှိသဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း ငွေစက္ကူအကြွေ တစတစ ရှားပါးလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ် (၁၃) ရက်မှစပြီး ကျပ် (၅ဝ) တန်နှင့် (၁ဝဝ) တန် ငွေစက္ကူများကို တန်ဖိုးတူ သတ္တုအကြွေစေ့များဖြင့် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား စီးပွားရေးဘဏ်က လဲပေးနေသည်။ သို့သော် (၁,ဝဝဝ) တန်၊ (၅ဝဝ) တန်များကို ငွေအကြွေ လဲပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ (၅ဝ) ကျပ်တန်ငွေစက္ကူကို (၅ဝ) တန် သတ္တုစေ့၊ (၁ဝဝ) တန်ငွေစက္ကူဟောင်းကို (၁ဝဝ) တန် သတ္တုစေ့ဖြင့် လဲပေးသည့်အတွက် သတ္တုအကြွေစေ့များ ပေါပေါများများ ထွက်မလာသေးကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက နေပြည်တော် သပြေကုန်းဈေးတွင် ကျပ် (၃ဝဝ) တန် ရေသန့်တဘူး ဝယ်သောက်သူတဦးက ဆိုင်ရှင်ကို ကျပ် (၅ဝဝ) တန် ပေးလိုက်ရာ အကြွေမရှိဟုဆိုကာ ကျပ် (၂ဝဝ) ဖိုးကို မုန့်တခုနှင့်ပီကေ တခု ပြန်အမ်းကြောင်းပြောသည်။ နေပြည်တော်၌လည်း ငွေစက္ကူအကြွေကိစ္စ ပြေလည်မှုမရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ်ချက်လက်မှတ်၊ ငွေထုတ်ကတ်ပြား၊ အလိုအလျောက် ငွေထုတ်စက်တို့ မရှိသည့်အတွက် ငွေစက္ကူများကို အမြောက်အမြား ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲ နေရပြီး အမြင့်ဆုံး ငွေစက္ကူသည် ကျပ် (၁,ဝဝဝ) တန် ဖြစ်သည့်အတွက် ရွှေ၊ ကား၊ တိုက်ခန်းနှင့် တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများ ဝယ်သည့်အခါ ငွေစက္ကူများကို မြွေရေခွံအိတ်ထဲထည့်ပြီး ပေးချေလေ့ ရှိကြသည်။
ကော့သောင်းမှာ ဆန် (၁၀) ပြည်ထက် ပိုမရောင်းရ၊ ဗိုလ်ချုပ်သာအေး ကော့သောင်းလာပြီးမှ ဆန်ဈေးပိုတက်
September 12th, 2008 by http://komyo.burmachannel.com
ကိုဝိုင်း/ ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
ကော့သောင်းမြို့သို့ ယခုလဆန်းပိုင်းက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်သာအေး ရောက်ရှိလာပြီး လူထုသက်သာ ချောင်ချိရေး ပြောဆိုသွားသော်လည်း ဆန်ဈေးများ နေ့စဉ်တက်နေသဖြင့် စားသုံးသူနှင့် ဆန်ကုန်သည်များ စိတ်ပျက်နေ ကြောင်း ကော့သောင်းမြို့ခံကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက "ဆန်ဈေးတွေက တက်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း တနေ့ချင်းကို တတင်းခွဲ တအိတ်ကို ကျပ် (၂) ထောင်၊ (၃) ထောင်ကြား တက်နေတယ်။ အဲဒါတွေက လူကြီးမိန့်ခွန်းပြောပြီး နောက်နေ့တွေမှာဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးအမြတ်လေးပေါ့။ ဆန်ကြမ်း၊ ဆန်ချော၊ ဆန်လတ် အကုန်တက်တာ" ဟု ပြောသည်။
ကော့သောင်းမြို့သို့ ယခုလ (၂) ရက်မှ (၅) ရက်အထိ ရောက်ရှိခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်သာအေးက မဉ္ဖူသကခန်းမ၌ ၀န်ထမ်းများ၊ ရ၀တများက ရွေးချယ်သူ အများစုပါသည့် အရပ်သားများနှင့် သီးသန့်စီတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဒေသခံများ စားဝတ်နေရေး ချောင်လည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စီးပွားရေး လမ်းဖွင့်ပေးရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေစေရေး ပြောဆို ဆွေးနွေးသွားသည်။ သို့သော် ၎င်းပြန်သွားသည်နှင့် ဆန်၊ ကွမ်းသီး၊ ဆားတို့ကို ကန့်သတ် ဖမ်းဆီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဆန်ဈေးများလည်း တက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
မြို့ခံကုန်သည်က "သူတို့ကို ယုံကြည်ဖို့အတွက် ပြောသွားတာပေါ့။ သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းချင်အောင် ပြည်သူလူထုကို ဆွဲဆောင်ဖို့အတွက် ၀န်ထမ်းတွေကို မိန့်ကြားသွားတာပေါ့။ ပြည်သူလူထုကိုလည်း တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပွဲ လုပ်တယ်လေ။ ဒီအတိုင်းပဲပေါ့။ ဘာတွေ အခက်အခဲရှိလည်း၊ ခြံစိုက်ဖို့ အသီးနှံမရှိဘူးလား၊ ခြံမရှိဘူးလား၊ မြေမရှိဘူးလား၊ မြေလိုရင် မြေပေးမယ်၊ ငွေလိုရင် ငွေထုတ်ချေးမယ်၊ ယုံကြည်အောင်တော့ ပြောသွားတာပေါ့လေ" ဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဆန်တင်ပို့မှု ရောင်းချမှုကိုလည်း အာဏာပိုင်များက ပိတ်ပင်မှုများ ပြုလုပ်ထားသဖြင့် ဆန်ဈေးမှာ ဆက်တက်ရန်သာ ရှိကြောင်း အဆိုပါကုန်သည်က ပြောသည်။
၎င်းက "ရှေ့လျှောက် ပိုတက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ ဆန်ကုန်သည်တွေ အားလုံးပြောပြီးပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အဆင်းဆန်ကို ပိတ်လိုက်ပြီလေ။ ထားဝယ်-ကော့သောင်း ဆင်းလာတဲ့ဆန်ကို ပိတ်လိုက်ပြီ။ ရန်ကုန်-ကော့သောင်း ဆင်းလာတဲ့ ဆန်ပါမစ် တွေကိုလည်း ပိတ်လိုက်ပြီ။ လှေတွေမှာ ဆန်မပါလာတော့ပါဘူး" ဟုပြောသည်။
ထို့အပြင် ဆန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့် ဒေသခံ မယက၊ ခယက တို့ကလည်း ယမန်နေ့၌ ညွှန်ကြားလွှာတစောင် ပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး မြို့တွင်း ဆန်ရောင်းဝယ်မှုကိုလည်း ထိန်းချုပ်လိုက်သောကြောင့် ဆန်ကုန်သည်များနှင့် မြို့ခံစားသုံးသူများသာမက ပင်လယ်အတွင်း လှေလိုက်နေသူများအတွက်ပါ အခက်အခဲများ ပိုမိုဖြစ်လာစေသည်ဟု သိရသည်။
မြို့ခံကုန်သည်က "ဆန် (၁၀) ပြည်ထက် ပိုမရောင်းရဘူး။ ရောင်းထားပြီးရင် အဲဒီလူရဲ့ လိပ်စာကို သေချာ အတိအကျ ယူရမယ်။ ကိုယ့်ဆိုင်မှာ ဆန် (၁၀) အိတ်ထက်ပိုပြီး မထားရဘူး။ ထားမယ်ဆိုရင် မယကကို အကြောင်းကြားပြီးမှ ထားရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်းလှေတစင်းမှာ အနည်းဆုံး ဆန်အိတ် (၁၀၀) လောက် ဆင်းသွားမှ ကျွန်းသမားတွေ ထမင်းစားလို့ရမှာပေါ့။ ဒီဆန် (၁၀) အိတ်က ဘာလုပ်လို့ရမှာလည်း (၁၀) ရက်စာပဲ ရမှာပေါ့၊ မြို့ထဲက လူတွေလည်း တန်းစီပြီး ဆန်ဝယ်စားပေါ့။ ဆန်ကုန်သည်တွေလည်း တအားစိတ်ညစ်နေပြီ" ဟု ပြောသည်။
ကော့သောင်းမြို့၏ ယနေ့ဆန်ဈေးနှုန်းသည် ဆန်ကြမ်း၊ ဆန်လတ်၊ ဆန်ချော အလိုက် တအိတ် (၂) သောင်းခွဲ၊ (၃) သောင်းခွဲ၊ (၄) သောင်း၊ (၅) သောင်း အစားစားရှိပြီး နေ့စဉ်တက်နေသော်လည်း မြို့ခံများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာမူ ကျဆင်းလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကော့သောင်းတွင် စက်လှေမီးလောင် ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ကျော် ဆုံးရှုံး
ခွန်အောင်မြတ်။ Network Media Group
စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်။
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကော့သောင်းမြို့တွင် ယမန်နေ့ည ၉ နာရီခွဲခန့်အချိန် စက်လှေတစ်စီး မီးလောင်သဖြင့် ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ကျော် ဆုံးရှုံးသည်ဟု ကော့သောင်း စက်လှေသမားများက ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ကော့သောင်းမြို့မှ စက်လှေသည် ထိုင်းဘက်ခြမ်းဖြစ်သည့် ရနောင်းမြို့သို့ ပင်လယ်ထွက် ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ငါး၊ ပုဇွန်များကို ရောင်းပြီး အပြန် ကော့သောင်းဆိပ်ကမ်းအနီးတွင် ဓာတ်ဆီအတင်အချ ပြုလုပ် စဉ်အတွင်း ဆေးလိပ်မီးမှ တဆင့် ကူးစက်လောင်ကျွမ်း ခြင်းဖြစ်သည်။
"ရွာကနေပြီးတော့ ပစ္စည်းလာရောင်းတဲ့လှေ ငါးတွေ၊ ဘာတွေ လာရောင်းတာ၊ ဟိုး(ထိုင်း) ဖက်ကမ်း ကို ရောင်း ရောင်းပြီးတော့ ပြန်လာ၊ ပြန်လာပြီးတော့ ဒီမှာ ဆီချတာပေါ့။ ဓာတ်ဆီချတာ ကနေပြီး တော့ ဆေးလိပ်မီးကြောင့် လောင်သွားတာ။ ရေလယ်ကို မောင်းထုတ် လိုက်တာ မောင်းထုတ်လိုက် ပြီးတော့ အလောင်ခံလိုက်တာ။ မီးက မနိုင်တော့ဘူးလေ။ အပျက်အဆီးဆိုလို့ လှေကတော့ အကုန် လုံးပါသွားတယ်၊ လူကတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ကမ်းစပ်မှာ ဖြစ်တာ။ " ဟု ကော့သောင်း စက်လှေသမား တဦးက ပြောသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းသည့် စက်လှေသည် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အလယ်မာန်ကျွန်း ဦးမောင်ကြီး ပိုင်ဆိုင်သည့်လှေဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းတွင် သား၊ ငါး၊ ပုဇွန်များကို တင်ပို့ရောင်း ချပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှ အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် စား အုံးဆီ၊ ဒီဇယ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာခဲ့သည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုအခြေအနေကို ကော့သောင်းမြို့ခံတဦးက ယခုလို ပြောသည်။
"မီးလောင်တော့ လှေမှာပါလာတဲ့ စားဆီတွေ၊ ဓာတ်ဆီတွေ လောင်တဲ့ ဥစ္စာတွေက ၉ နာရီ ခွဲက ဖြစ် တဲ့ ဥစ္စာ မီးက ဘယ်အချိန်လောက်မှာ သေသွားမှန်းမသိ ကျနော်တို့ အိပ်ပျော်သွားပြီ။ မနက်သုံးနာရီ အထိ မီးလောင်တယ်လို့ ပြောတာပဲ။ အခုက လှေကြီးက ဟိုး ကျွန်းက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးနဲ့ သိပ် မဝေးပါဘူး။ အဲဒီနားမှာ သောင်တင်ပြီးတော့ မြုပ်နေတယ်။ ပစ္စည်းတွေကတော့ အားလုံး ဆုံးရှုံးတာ ပေါ့။ လူကတော့ မသေပါဘူး။ ကမ်းနားမှာဆိုတော့ လူတွေက ခုန်ချ၊ ပြေးတဲ့လူလည်း ပြေးကုန်ကြပြီ လို့ ကြားတယ်။"
စက်လှေ မီးလောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကော့သောင်းအာဏာပိုင်များက စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု ပြုလုပ်သော်လည်း စက် လှေပိုင်ရှင်နှင့် ပါလာသူများမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဟု အာဏာပိုင်နှင့် နီးစပ်သူက ပြောသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိ ကျွန်းစု ရွာများက စက်လှေများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်း မြို့သို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများ သွားရောက်ရောင်းချပြီး မြန်မာပြည်သို့ စားအုန်းဆီ၊ အချိုမှုန့်၊ ဓာတ်ဆီနှင့် အခြား လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ယ် ယူသယ်ဆောင်လေ့ ရှိသည်။
via gHacks technology news by Martin on 9/3/08
Have you ever wondered how your babies would look like if you would have one with your partner? Now you can find out at the Make Me Babies website. Just uploadaphoto of yourself and your partner, waitamoment and takealook atapicture that could show your future child. Think it would be pretty funny if the developers of Make Me Babies would get sued byacouple who expected their baby to look like the generated picture but did not.
Could also beanice way to determine if you are really the father ofababy.. Sorry, just kidding. The user simply uploads at least one picture and either uploadsasecond picture or picks the face ofacelebrity from the celeb database.
If you ever wondered how your baby with Brad Pitt, Angelina Jolie, Paris Hilton or Johnny Depp would like then here is your change to find it out.
The user can pickababy frame, selectagender and name for the baby before the baby morphing technology steps in and creates the face of the could be baby.
This is an interesting idea for couples who like to discuss how their children will look like but also for others who love to find out about it. Neat idea.
ရခိုင်ပြည်နယ် ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျောက်တွင် ပင်လယ်ရေမှော်များသဘာဝအလျောက်များစွာပေါက် ရောက်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျောက်တွင် ပင်လယ်ရေမှော် များသဘာဝအလျောက်များစွာပေါက် ရောက်လျက်ရှိနေကြောင်းနှင့်ဒေသ တွင်းနိုင်ငံအချို့၌ ပင်လယ်ရေမှော် ကို စိုက်ပျိုးမွေးမြူ၍ ကုန်ချောထုတ် လုပ်ကာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ထိုး ဖောက်ပြီး နိုင်ငံခြားဝင်ငွေများရှာဖွေ လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှထွက်ရှိသည့် ပင်လယ်ရေမှော်များကိုအသုံးပြုလုပ် ကိုင်သည့် ကျောက်ကျောစက်ရုံတစ် ခုကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၀ ပြည့် နှစ်ဝန်းကျင်က သံတွဲမြို့ပြင်ကျေး ရွာ၌တည်ဆောက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ ကြောင်းနှင့်ယင်းအချိန်က ကုန်ကြမ်း ကို ကန့်သတ်ဈေးဖြင့်ပေးဝယ်ခဲ့၍ ရှာဖွေသူနည်းပါးခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသခံများမှာ ပင်လယ်ရေမှော်ကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြပြီး ကုန်ကြမ်းရရှိမှုအနေ အထားကိုလေ့ လာကာ ဒေသတွင် ကျောက်ကျော စက်ရုံတည်ထောင်နိုင်ပါက ဒေသ တွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များလည်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ် ကြောင်း လေ့လာသူများကသုံးသပ် ကြပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျောက် ကျောများကို ရမ်းဗြဲကျွန်း၊ မာန် အောင်ကျွန်း၊ ဖြူကျွန်း၊ စတုကျွန်း၊ ရဲကျွန်း၊ တိုက်ကျွန်း၊ အုန်းတစ်ပင် ကျွန်းများတစ်လျောက် အမြောက် အမြားရရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၏ ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ပေါက် ရောက်ဖြစ်ထွန်းနေသည့် ပင်လယ် ရေမှော်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၀၀ ခန့်ရှိ ကြောင်းသိရပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသည် ရေ မှော်ကျောက်ပွင့်များကို စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်၍ ကုန်ချောပြုပြင်ထုတ် လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း သိရ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တနင်္သာရီတိုင်း တွင် ပင်လယ်ရေမှော်မွေးမြူမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်တောင် ပိုင်း ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်များ ၌လည်း လိုအပ်သည့် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ကာ မွေးမြူရန်ကြိုးစားသင့် ကြောင်း သိရသည်။
Weekly Eleven သားရွှေဦး (ကစ္ဆပ)
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://kawthoung.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[CHERRY PAN] 25 New Entries: အသက်သွေး
[ခပ်ရင့်ရင့် အတွေး သံစဉ်များ] 25 New Entries: အချစ...
[KhunMoung ' s] 25 New Entries: Anthropological in...
[ရင် ခုန် သံ] 18 New Entries: လာလည်ပါတယ်ရှင့်
[ကွန်ပျူတာ ဒိုင်ယာရီ] 17 New Entries: Running Mult...
[CHITSANM'S LUXURY MUSIC] 25 New Entries:
[နံနက်ခင်းကဗျာ] 25 New Entries: ကလေးများနေ့
[KyiMayKaung]6New Entries: Kyi May Kaung on art ...
[ထုဆစ်ပြီးသောရင်ခွင်အပိုင်းအစလေးများ] 25 New Entri...
[KHIN MYO WINN]9New Entries: ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနော...
[Better Tomorrow] 1 New Entry: အွန်လိုင်း လက်ဆောင်...
[ကြုံဆုံမိသမျှ]2New Entries: Fwd: Chat with htet...
[စိတ်ကူးယဉ်အိမ်ကလေး] 25 New Entries: ဘလော့မှခဏအနား...
[မြွေပွေးဘစီ] 25 New Entries: No Select No Copy
[MIN TUN] 25 New Entries: ငါ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်
[မောင်ကျော်ဇေယျ] 25 New Entries: စင်္ကာပူ ပညာရေးဆွေး...
[K]2New Entries: just simply gloomy
[ကိုဈာန်] 25 New Entries: ကမ်းတတ်တိုက်ပွဲ
[ALL Friend's Welcome to My WordPress.com]6New E...
[Sing Swim Sway.....] 25 New Entries: Bangkok is S...
[သီချင်းကြိုက်တဲ့အရူးလေး] 25 New Entries: ...အိပ်မ...
 10 New Entries: ဗိုလ်ချုပ်၏ အတ္ထုပတ္တိ တပိုင်းတစ
[Yan Aung] 1 New Entry: ဘလော့ဂါဗီဇနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ အ...
[Royal Prince] 11 New Entries: မြန်မာပြည်ကလျှပ်စစ်...
[ကဗျာချစ်သူ (Poem Lover)] 25 New Entries: တန်ဖိုးမ...
[ကဗျာသီတဲ့ ကြိုး] 25 New Entries: မေးခွန်းက ကမ္ဘာေ...
[ကပ်ပါပေ့ ပီကေရယ်]3New Entries: စက္ကန့်ပေါင်း (၃၁...
[How to blog] 25 New Entries: Yahoo Pipe ဖြင့် Blo...